Chick faraxsan, emulator-ka-wada-mid ah ee iOS iyo Android | Wararka IPhone
Nasiib ayaan ku jirnaa. dushiisa, konsollooryo hadda duugoobay, taas oo ka hortageysa soo-saarayaashu inay lacag ku helaan tan.
Si kastaba ha ahaatee, ka dib imaatinka macruufka 9 iyo isbeddelada kala duwan ee gudaha, adduunka emulators ayaa helay dharbaaxo adag, waana taas oo kaliya in ay ka dhib badneyd in la rakibo barnaamijyo ka baxsan AppStore laakiin waxay u muuqataa in Apple ay taabatay wax la yiraahdo JIT iyo emulators sida PPSSPP oo joojiyay shaqadii xitaa qabashada JAILBREAK sameeyey.
Si kastaba ha noqotee, tani si xatooyo ah ayey isu bedeshay, waana in emulators-ka sida PPSSPP aysan wali si rasmi ah u shaqeyn, mararka qaarna appku ma raaco oo haddii culeyskani xirmo marka la furayo ciyaar. Dhinaca kale, emulators-ka sida NDS4iOS waxay ku guuleysteen inay mar kale ka shaqeeyaan iOS 9, in kasta oo ay u baahdeen caawinta degellada sida iEmulators in lagu rakibo iyada oo aan JAILBREAK la siinayo tilmaamaha cusub ee isticmaalayaasha (rakibida astaamaha).
Dhammaantood waxaa ka dhashay codsi cusub oo u imanaya inuu sheegto dhammaan dhulalka uu xukumo, waxaan ka hadlayaa Digaag faraxsan, codsi magac aan waxba galabsan iyo astaan ​​xitaa ka sii daran (digaag qosol badan), si kastaba ha noqotee laga bilaabo marka aad furto waxaad arkeysaa kartida weyn ee ay leedahay iyo iyada oo aan loo arkin inay soo socoto waxay noqotay ku dayashada ugu fiican iyo tan kaliya on macruufka.
Chick Happy ayaa lagu rakibi karaa aaladaha bilaa JAILBREAK (Dabcan, adeegsiga astaan ​​horumarineed), marka tan la sameeyo markii aan fureyno waxaan arki doonaa waxa loogu yeeri karo «Bakhaarka Ciyaarta», laakiin halkii barnaamijyada laga heli lahaa waxay noo soo bandhigeysaa buugga ku qoran luqado badan iyo ciyaaro badan. , taasna waa inaan u helno bilaash bilaash ah Pokémon of GameBoy, iyada oo loo marayo ciyaaraha Nintendo DS iyo xitaa kuwa PSP iyo Playstation 1.
Dhamaan cayaaraha si dhaqso ah iyo si toos ah ayaa loo soo wada dejisan karaa isla codsigan, markii la soo dejiyana waxaa lagu fulin karaa goobta, xitaa kuwa ka socda PSP, maadaama barnaamijkan uu adeegsanayo qaybo ka mid ah kuwa kale (tusaale ahaan, ciyaaraha PSP waxay adeegsadaan nidaamka PPSSPP, in kasta oo ay iyagu ku guuleysteen inay ka shaqeeyaan iyada oo aan dhibaato weyn laga helin macruufka 9 iyo JAILBILA la'aan).
1 Sida loo rakibo Happy Chick
1.1 Tallaabada 1
1.2 Tallaabada 2
1.3 Tallaabada 3
1.4 Tallaabada 4
2 Macluumaad muhiim ah
Sida loo rakibo Happy Chick
Halkan waa habka, waana taas waa wax ka duwan waxa aan badanaa aqaanno, Maaddaama Happy Chick uu ku jiro beta beta waxaana nalooga baahan doonaa inaan helno fure furaha ah, fure isla markiiba na siinaya oo bilaash ah oo na siiya iyada oo la adeegsanayo adeegsade otomaatig ah ee WeChat.
Waan soo dejineynaa WeChat waanan diiwaangelinnaa (nidaam aad u dhakhso badan oo fudud, waxay la mid tahay WhatsApp).
Waan helnaa shabakadan oo waxaan raacnaa tilmaamaha ku jira sawirada si loogu daro isticmaalaha "xiaojigame" WeChat oo aan u codsanno lambar.
Marka jawaab lagaa helo, waxaan soo galidoonaa degel aan kala soo dagsan karno emulatorka, astaanta noo ogolaaneysa inaan u adeegsanno JAILBIL la'aan oo aan aragno koodhkeena hawlgelinta:
Tallaabada 1 iyo 2 ee degelkan waa in la raaco si loo soo dejiyo (tallaabada 1) oo u oggolow isticmaalkiisa iyada oo aan la xirin (tallaabada 2, kaas oo ku lug yeelan doona gelitaanka Dejinta, rakibidda astaan ​​iyo gujinta «Aaminto").
Si aad u nuquliso nambarka shaqeynta, si fudud u riix una hayso oo nuqul ka samee, niyada ku hay in lambar kasta uu yahay mid shaqsi ah oo aan la wareejin karin, looma isticmaali karo in ka badan hal qalab:
Hadda waxaa haray oo kaliya in la furo arjiga rakibay iyo ku dheji koodhka in aan horey u soo guurinay, tani waxay na siin doontaa marin u helka buugga ciyaarta oo waxaan bilaabi karnaa inaan ciyaarno midka aan dooneyno isla marka la soo dejiyo.
Waxaa xusid mudan dhowr waxyaalood, in lagu bilaabo hadalkaas codsigu wuxuu ku jiraa beta, taas oo u horseedi karta xiritaanka marmar (oo aan wali aniga igu dhicin) ama bug kale oo u baahan in la xaliyo.
Waxa kale oo muhiim ah in marka aad soo degsanayso ciyaaraha aad hubiso in calaamadda ka hooseysa miisaanka MB ee faylka dhig ESP ama EU, tani waxay macnaheedu noqon doontaa in ciyaarta ay noqon doonto mid Isbaanish ama Ingiriis ah ugu yaraan, haddii kale waxaan ku dhammaan karnaa inaan ku ciyaarno Japanese.
Ugu dambeyntiina waxaad dhahdaa rakibaadda astaamaha aan la aqoon waxay ku socotaa mas'uuliyaddaada, waana in kastoo aanan helin nooc hawlgal aan caadi ahayn oo nidaamka ka mid ah, haddana waa run in rakibidda astaan ​​ay khatar ku tahay amniga iyo / ama asturnaanta qalabkaaga, tanina waxay ka dhalan kartaa gudbinta macluumaadka qalabka iyo isticmaalkiisa server-yada aan la fasaxin illaa laga rakibo barnaamijyo aan ka tirsaneyn App Store dhibaato la'aan, taas oo fududeyn karta soo gelida malware-ka qalabkeena.
Kuwani waa kaliya kiisaska ugu xun, waxaan ku adkeynayaa, inaysan wax dhibaato ah ka jirin marka la isticmaalayo astaantaan, marwalba waad kala noqon kartaa kalsoonida oo xitaa waad tirtiri kartaa iyo dhammaan codsiyada ay qaar ka mid ahi sameeyaan, waana taas, haddii malware la rakibay, ayaa ka soo bixi lahaa liiska codsiyada oo ay ku jiraan astaanta hoosta Settings / General / Profiles / ProfileX.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Chick faraxsan, emulator-ka-All-ka ah ee macruufka iyo Android ka aad jeceshahay. [Casharrada rakibaadda]
Juan aad ufiican, mahadsanid
Ku jawaab Dulux
Waad ku mahadsantahay adiga Dulux faallooyinkaaga ^^
Dhowr maalmood kadib shaqadu way joogsataa. Waxaa lagu tijaabiyay dhowr iphone. Ha dhibin.
Salaan kadib, waxaa jira qeyb ka mid ah barnaamijka (iyo sidoo kale fariin marka ugu horeysa ee aad furto) taas oo kugu dhiiri galinaysa inaad ku darto shaashadda guriga “Crash Fix”, ma aanan sameynin sababtoo ah waxaan doonayaa inaan arko inta ay waa socotaa (walina way ii shaqeysaa aniga) laakiin haddii ay shaqada joojiso, waa inaad u tagtaa.
Salaan! Aad baad ugu mahadsantahay fikradaada. Waan ku faraxsanahay emulator-ka, laakiin toddobaad kadib markii aan rakibey, si lama filaan ah ayey shaqada u joojisay.
Markii aan isku dayo inaan furo arjiga waxaan helayaa farriintan: "ganacsi aan aamin ahayn oo horumaray" isagoo dhahaya ma helayo xaqiijinta kalsoonida taleefankayga iPhone-ka mana ii ogolaanayo inaan galo, taas oo ah wax lala yaabo maxaa yeelay waxaan siiyay waqtigaas. Si aan isugu dayo inaan u saxo waxaan aaday boggaga xoghaynta mar labaadna waan xaqiijiyay, laakiin ma xaqiijinayo mana i siineyso nooc kale oo fariin ah. Ma iga caawin kartaa sidii aan u hagaajin lahaa? Waxaan jeclaan lahaa in aanan iska bixin oo aan lumiyo horumarka oo dhan (haddii ay suurta gal tahay).
Taasi miyaan arkay jawaabtaada quique oo ma ogi xD
(Ma haysto JAILBILAND)
Ku jawaab Nahi
Waxba yeeli mayno inaad sidoo kale faallo ka bixiso halka laga helayo .ipa si toos ah loogu rakibo qalabka leh Jailbreak. (inaad markasta ilowdo kuwa naga mid ah oo xabsi ku jira).
Ku jawaab sdsd
Maya gabi ahaanba aqristaha qaaliga ah, waxaad lahadleysaa taageere kale oo JAILBREAK ah 😛 Hadaad fiiriso casharka rakibida waxaad arki doontaa sawirka oo leh "dadka isticmaala Jailbreak halkan ka soo degso" oo tilmaamaysa in dadka isticmaala JAILBREAK ay tahay inay raacaan wadooyinkan, si ay u helaan .ipa oo kaliya Waxaad ubaahantahay inaad gasho xiriirinta soo dejinta ee lagu bixiyay WeChat, oo maadaama aad leedahay JAILBILA ama aanad lahayn, dalabku wuxuu u baahan yahay koodh hawlgal ah, habka loo rakibo waa isku mid iyada oo aan lahayn JAILBREAK 😀
Chick farxad leh ayaa jiray sanado badan hada waana mid aan xasilooneyn oo ku saabsan macruufka, onridda si fiican ayey u socotaa
Jawaab lazlo losla
Danny 85 dijo
Halkaas waxay yiraahdaan waxaa jira xabsi 9.3. Waa run? Iyadoo loo marayo twitter-ka gaar ah @teamswizz_
Danny85 Negative, adigoon ka baqaynin inuu khaldamo waxaan kuu sheegayaa in astaanta aad ku tidhaahdo Twitter ay tahay mid been abuur ah, iyo inay haystaan ​​cadaymo lagu qanci karo iyo ogolaanshaha kuwa goobta ku sugnaa in muddo ah oo wali firfircoon (haakarisku sida waxaad cuntaa, p0sixninja, pod2g, MuscleNerd iyo kuwa kale) ama Saurik laftiisa oo tilmaamaya wadashaqeyntiisa, waa inaadan si dhab ah u qaadan, waxay u badan tahay inay raadinayaan kuwa raacsan, tabarucaad, xayeysiin ama kiiskii ugu xumaa ee lacago been ah lagu badalo, na raac iPhone News si aad u ogaato waqtiga saxda ah marka jeelka macruufka 9.3 la sii daayo 😀
Waxay ku wada qoran tahay Shiinaha…. hage kasta oo lagu maamulayo ciyaaraha?
Ku jawaab andreco
: 'DI ma ogi hadii si sax ah loo rakibey laakiin arjigu wuxuu ku soo baxayaa af ingiriisi, iyo ilaa intaad raacdo talada maqaalka, adigoo soo dejinaya kaliya ciyaaraha leh calaamadda ESP, EU ama EN, ciyaaruhu waa inay ahaadaan Isbaanish ama ugu yaraan Ingiriis…
Si aad u socodsiiso ciyaar kaliya soo dejiso, markii aad soo dejiso waxaad ka heli doontaa qeybta dhexe ee arjiga, guji ciyaar wuuna bilaaban doonaa.
Emulatorkani miyuu ciyaaraa ciyaaraha arcade sida mame?
Markuu siinayo soo dejinta wuxuu sugi doonaa weligiis. Waxaan haystaa 9.3 iyo 6s
Ku jawaab antakel
Si fiican ayey u rakibtaa oo si habsami leh ugu ciyaartaa iPhone 6 oo lagu daray.
Ma jiraa qof garanaya sida loola ciyaarayo kantaroolaha ps4 ???
Waa hagaag, ka dib 15 daqiiqo, waxay bilowday inay soo dejiso oo laba saacadood ayay ku jirtay, ma aha in toban meelood meel laga soo dejiyo.
Aad baad u mahadsantahay! Ma ogaan laheyd sida loo dhigo Ingiriis ama qaar ka mid ah luuqadaha reer galbeedka ugu yaraan, waa inay ku soo baxdo oo kaliya Jabbaan.
Waad ku mahadsantahay 🙂
Wax walba waxay ku jiraan Shiinaha, emulator-ka ku jira mame wuxuu si fiican u shaqeeyaa (dhowr jeer ayaan isku dayay Roms), laakiin ma ogaanayo udub-dhexaadkeyga, markaan ku joogo Shiinaha waa wax aan macquul aheyn in la fahmo xulashooyinka qaabeynta kala duwan,
Waad salaaman tahay, sifiican ayey iigu shaqeysaa, kaliya waxaan kala soo degaa marka hore taleefankayga gacanta kadibna saaxiibkey oo wuxuu ku helaa menusyada Jabbaan ama Shiine, qofna ma oga hadii la bedeli karo
Waad ku mahadsan tahay umeerinta iyo waliba ogsoonaanta in lagu rakibi karo iOS9.3 iPhone 6 iyo iPad Mini 3, kaliya talaabada 3aad waxaa fiican inaad nuqul ka sameysato oo aad ku dhejiso koodhka adoo adeegsanaya barnaamijka gacanta adoo adeegsanaya maxaa yeelay hadaad sameyso kama fureyso iskuxirka safari rakibida shiineeska, waxay ila tahay. Waxaan ku hayaa mid Ingiriis ah kan kalena Shiine, waxaa xusid mudan inay tahay 1 adeegsade / wechat isticmaale, marka haddii aad qalab badan leedahay, sameyso koonto kale. Kaliya waxaan ubaahanahay inaan ogaado sida loo isticmaalo Foornadayda Steelseries MFi
Fiican @diego_nrg !!!
Miyaad hubisay in qalabkaaga MFI ay la shaqeeyaan digaagga faraxsan ??? Waxaan ka fikirayaa inaan iibsado a.
Waxaan ku rakibey oo joojiyey shaqadii. Waxaan isku dayay inaan dib u rakibo laakiin hada waxay bixisaa qalad rakibida. Ma jiraa qof og haddii ay caadi tahay ama loogu talagalay beta?
Mar dambe ma shaqeyso =: :( waxay qaadatay waxyar wiig ka badan (taas oo aan aad ugu faraxsanahay) si kadis ahna puumm mar dambe uma furmayo.
Ku jawaab Havok
Waad ogtahay sababta weCodku iigu oggolaan doonin inaan iska diiwaan geliyo Chile lambar laga bilaabay 4 ☹️ Caawin !!!
Jawaab Luis Dunker
Ikhtiyaarka loogu talagalay isticmaaleyaasha aan lahayn JAILBREAK iima muuqato aniga
Ku jawaab Darknighr
Markii aan rabo inaan soo dejiyo waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn inlagu xiro, maxaan sameeyaa?
Marka fariin qalad ah soo muuqato markii la furayo, waa inay bedelaan taariikhda iPhone-keeda illaa Julaay 2014 waana u oggolaan doontaa inay galaan waa inay sameeyaan markasta oo ay rabaan inay i ciyaaraan, waxay joojisay shaqadii markii ay isku dayeysay inay furto, ima aysan tusin wax uun, aniga uun baa i xidhay
Ku jawaab Marzio
Markii aan u diro farriinta IOS waxay ku jawaabaan raali gelin, chinwong tong Hong Kong fung shicha lica. (Uma soo baxdo sida sawirka ku jirta) MAXAAN SAMEEyaa?
Ku jawaab Santiago Romero
Waa salaaman tahay, dib ayaan u dul-sababayaa maqaalka si aan uga faalloodo dhibaato ay tahay inaan arko haddii aad i caawin karto.
Waana in aan ku rakibay App-ka aaladda macruufka oo aan lahayn JAILBREAK.
Waxay ii ogolaaneysaa inaan soo dejiyo ciyaaraha laakiin FFVII qalad ayaan ku helayaa markaan dhameeyo soo dejinta: "unzip failed", qofna ma leeyahay xal?
Si kadis ah, waa ciyaartii aan aadka u doonayay inaan ku daydo ...
Dhammaantiin waad salaaman tihiin! Intii aad qasan lahayd inaad soo dejiso, waxaan toos uga soo degsaday webka. In android waa qumman yahay. On IPhone ma aanan dooneynin inaan rakibo sababtoo ah arinta shahaadada. Haddii qof uu ku haysto IPhone, noo sheeg sida ay wax u socdaan. Salaan
ay psp iyo ciyaaraha dc oo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu habboon emulator-kan waxaan u leeyahay lenovo k5 mahadsanid
Jawaab gerardo pabon
Sideen u masaxaa cayaaraha aanan sii joogin ama ay aniga uun ila qabsan waayeen
Waad salaaman tihiin, App-kii ayaan rakibey, laakiin iphone-kayga ayaa xira. Waxaan hayaa iphone 5 oo leh noocii ugu dambeeyay ee macruufka. Suurtagal ma tahay in App-ka aan loo heli karin macruufka?
Waad ku ciyaari kartaa digaag farxad leh sony ercsson x play Waan ku qanacsanahay jawaabtaada mahadsanid
Ku jawaab Oliver
Waxaan jeclaan lahaa inaad emulator u dhigto kulamada ps2 ama fadlan ku dar maxaa yeelay waxaan rabaa inaan ku ciyaaro masduulaaga shin shino budokai tenkaishi 3 iyo waliba inaan isbaanishka ku ciyaaro fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad emulator u dhigto ps2
Jawaab Fernando Vasquez
QuickCenter waxay u keentaa 3D Touch la ekeysiiyay Xarunta Xakamaynta